सुत्केरी नुसरतलाई तपाईको छोराको बुवा को हो भन्दै जब पत्रकारले सोधे ? दिइन् यस्तो मुख बन्द हुने जवाफ – My Blog
सुत्केरी नुसरतलाई तपाईको छोराको बुवा को हो भन्दै जब पत्रकारले सोधे ? दिइन् यस्तो मुख बन्द हुने जवाफ
No Comments on सुत्केरी नुसरतलाई तपाईको छोराको बुवा को हो भन्दै जब पत्रकारले सोधे ? दिइन् यस्तो मुख बन्द हुने जवाफ
एजेन्सी । अभिनयको दुनियाँबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री नुसरत जहाँले गत महिना २८ अगस्टमा छोरालाई जन्म दिएकी थिइन्। नुसरत जहाँको नीजि जीवन बारम्बार चर्चामा आउँछ । नुसरत चर्चामा आएकी थिइन् जब उनले आफ्नो पति निखिल जैनसँगको विवाहलाई अवैध भनेकी थिइन्।
निखिलवाट अलग बसेकी नुसरतले गर्भावस्था को खबर सार्वजनिक गरेपछि सबै चकित परे । सुत्केरी नुसरतलाई अस्पताल बाट डिस्चार्ज गरियो, बंगाली अभिनेता यशदास गुप्ता उनीहरुलाई लिन आए। जस पछि नुसरत लाई बारम्बार सोशल मिडिया मा सोधिएको थियो कि उनको छोरा को बुबा को हो ?
नुसरत आमा बनेपछि पहिलो पटक सार्वजनिक रुपमा देखिएकी थिइन्
नुसरत जहाँ आमा बन्नु भन्दा पहिले र आमा बने पछि पनि सोशल मिडियामा धेरै सक्रिय थिइन्। हालै आमा बनेपछि नुसरत जहाँ पहिलो पटक मिडियाको सामुन्ने आएकी थिइन्। नुसरत जहाँ कोलकातामा एक सैलुनको उद्घाटन कार्यक्रममा भाग लिन पुगीन् । यस क्रममा मिडियाले उनलाई धेरै प्रश्न सोधे। तर जब उनले उनलाई उनको छोराको बुबाको नाम सोधियो उनी रिसाइन् ।
नुसरतले भनिन्, कस्तो अनौठो प्रश्न ?
नुसरत लाई आफ्नो छोरा यशनका बुबाको नाम सोधियो उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । वास्तवमा एक रिपोर्टर प्रश्न सोधे, उनको पतिको नाम के हो ? यसको जवाफमा नुसरतले भनिन्, ुयो एक धेरै अनौठो प्रश्न हो। एउटा महिलालाई यस्तो प्रश्न सोध्नु भनेको उसको चरित्रलाई प्रश्न गर्नु हो कि बच्चाको पिता को हो ? उसको बुबा लाई थाहा छ की उनी आफ्नो बच्चाका बुवा हुन् । हामी दुवै जनाले बच्चाको मिलेर हेरचाह गरेका छौं । यश र म सँगै राम्रो समय बिताइरहेका छौं।
आफ्नो छोरा को सही नाम
रिपोर्टका अनुसार नुसरतले आफ्नो छोराको नाम यशदास गुप्ता राखेकी थिइन् । यस्तो स्थिति मा, जब उनीलाई उनको छोराको सही नाम सोधियो, उनले जवाफ दिइन्, ुयो मेरो लागी एक नयाँ जीवन को शुरुवात हो। नुसरतले भनिन् कि उनको छोराको नाम यशान हो। भर्खरै, उनको सोशल मिडिया अकाउन्ट मा तस्वीर साझा गर्दा, नुसरतले उनको श्रेय पिताजीलाई दिइन्। यसको साथमा, उनले लेखेकी थिइन् जनको सुझाव तपाइँ लिनुहुन्न त्यसको आलोचना स्वीकार गर्नु हुदैन।
यो जवाफ छोराको पहिलो झलक मा दिइएको थियो
जब मिडियाले नुसरतलाई सोधेका थिए कि उनी आफ्नो छोराको पहिलो झलक कहिले देखाउछिन्, उनले जवाफ दिईन्, ुतिमीले यो बच्चाको बुबालाई सोध्नु पर्छ, उसले कसैलाई आफ्नो छोरालाई देख्न दिदैन। यसको साथमा, नुसरतले यो पनि भनिन् कि उनी यस समयमा कुनै डाइटमा छैनन् किनकि उनले आफ्नो छोरालाई खुवाउनु पर्छ। उनले आफ्नो छोराको बारेमा भने कि उनी बिल्कुल ठीक छन्।
नुसरत आफ्नो पतिबाट अलग भएकी छिन्
नुसरत जहाँ र व्यापारी निखिल जैन को विवाह २०१९ को सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विवाह मध्ये एक थियो। उनीहरु दुबैको विवाहको तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका छन्। यसअघि दुबै एक अर्कालाई डेट गरेका थिए। विवाह संस्कार टर्की मा भएको थियो जहाँ मात्र परिवार र साथीहरु उपस्थित थिए। जे होस्, गत बर्ष देखि, नुसरत को नाम बंगाली अभिनेता र भाजपा नेता यश दासगुप्ता संग जोडिएको छ। तर दुवैले यो प्रेमको पुष्टि गरेका छैनन्।
← म बाँच्न चाहान्छु : तपाइहरुको सानो सहयोगले बाँच्न सक्छु [ सेयर गरिदिनुहोस् ] → के आयो यस्तो रोग ? एकाएक बिरामी पर्न थाले मानिसहरु ? अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछी चिन्ता बढ्यो